Ukufaka i-TLP ku-Arch Linux | Kusuka kuLinux
Ukufaka i-TLP ku-Arch Linux
TLP iyithuluzi eliphambili eliphethwe yi-terminal kuphela futhi lihlose ukuphatha amandla ama-laptops ethu, lisebenzise kangcono ibhethri labo.
Angazi noma senginalo yini ithuluzi lokuphatha amandla ku KDE, I-GNOME o Xfce Kuyadingeka ukufaka lolu hlelo lokusebenza, noma kunjalo, uma ufuna ukuzama ngiyakutshela ukuthi kanjani, futhi kuzosiza kubasebenzisi abasebenzisa kuphela abaphathi bamawindi.
Ukufaka ukusatshalaliswa ngaphandle kwe-Arch Linux, ungaya ku- lesi sixhumanisi
Abasebenzisi abane- Yaourt efakiwe kufanele nje isebenze:
Kepha angikusebenzisi lokho, ngenza izinto ngakho ukwakheka. Inkinga ukuthi lapho ngizama ukudala iphakheji ukuyifaka, ngithole iphutha ngoba iskripthi PKGBUILD Bengizama ukufinyelela kufolda ebingekho.
Izinyathelo zokufaka i-TLP
Into yokuqala okufanele siyenze ukufaka ukuncika okudingayo I-TLP:
Manje kufanele silinganise iphrojekthi kusuka ku- IGitHUB:
Siphumile i-tarball ngemibhalo edingekayo ukuze ukwakheka umsebenzi:
Siyayivula uziphu bese siyasebenza ukwakheka:
Lapho iphakheji tlp-0.3.9-9-any.pkg.tar.xz idalwa siyifaka ne:
Futhi yilokho kuphela. Njengoba ngifundile, akudingeki ukuthi wenze noma yini enye, vele unike amandla insiza bese uyisebenzisa:
$ systemctl vumela tlp.service $ systemctl qala tlp.service
Ngemuva kwalokho ukubona izibalo ezithile noma amadivayisi ekhompyutha yethu senza noma imiphi yale miyalo emi-3 (ngokwehlukana):
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ukufaka i-TLP ku-Arch Linux
Kuhle kakhulu. Kodwa-ke, kwaDebian kunesicelo se-console esibizwa nge-TOP esisebenziseka ngempela futhi sikhombise izinqubo ngesikhathi sangempela futhi sishesha kakhulu kunabaphathi bomsebenzi engibabonile kuze kube manje.
I-TOP iyingxenye ye-GNU. Impela zonke izinhlelo ze-GNU / Linux zine-TOP (engingayithandi, ngendlela… ngithanda i-HTOP). Futhi angiqondi ukuthi i-TOP ihlangana ngani ne-TLP ...
Ngivumelana nawe. Futhi, i-TOP ikhombisa inani lememori yamahhala engalungile: liyikhombisa emuva. Qhathanisa lokho okuthola usebenzisa i-TOP nalokho okuthola usebenzisa i-HTOP futhi uzobona ukuthi ngiqonde ukuthini.
UCarlos saldaña kusho
sawubona ngicabange ukuthi i-athikili ibimnandi kepha ngifisa ukwazi ukuthi ngabe lelo phakeji lisebenzela i-debian futhi uma lifakwe ngendlela efanayo, ngoba ngine-xps 15 ethi ku-w ... ihlala cishe amahora amahlanu kepha ku-debian 5 7bits ihlala 64:2 cishe…
Phendula ku-carlos saldaña
Iphutha lami. Ngikhohliwe ukuxhuma ekhasini lephrojekthi lapho bachaza khona ukuthi bangafaka kanjani kwi-Distro ngayinye. Ngibuyekeza okuthunyelwe kungekudala.
U-Elav muhle ukucacisa ukuthi abasebenzisi abasebenzisa i-yaourt abadingi i-git noma baqonde ngama-tarballs, kubanele nge:
$ eyourt -S tlp
Yebo, kuyindlela yokuqala engikhombisa ngayo ku-athikili.
Uma ngiqonde kahle, lokhu kungumqaphi wokugcina kuphela wezinqubo, izinsizakalo namadivayisi esiwenzile sasebenza noma sisebenzisa okwamanje, noma ngabe nginephutha?
Akulungile ngokuphelele. I-TLP iyinsizakalo yokonga amandla, ayihlangene nenqubo, insizakalo kanye nokuqapha idivayisi. Faka futhi ubone ukuthi ibhethri lakho lihamba kanjani; kufanele isebenze kangcono (yize ngikhuluma iqiniso angikutholi ukuthi kuzothatha isikhundla sangempela seJupiter)
kulungile ngiyabonga ngethiphu. ukuhlolwa okwamanje
Imininingwane eyodwa, awudingi ukungeza iSudo ku-yaourt: v
Akudingeki nje kuphela kepha futhi akunconyiwe, futhi uYaourt uqobo uyayixwayisa lapho efuna ukuyisebenzisa ngeSudo.
Umbuzo wami uthi iyiphi i-tlp engcono noma amathuluzi we-laptop, i-laptop yami okwamanje inamathuluzi we-laptop
Njengoba u-Irvandoval ebuza, umuntu ovela kokuhlangenwe nakho, bakubonile ukusebenza okungcono? Ingabe kufanelekile ukufaka?
i-tlp manje isiyatholakala ezindaweni ezisemthethweni ze-archlinux repos
Mayelana nendatshana yokugcina eshicilelwe